Chelsea Oo Qorsheynee In Ay Iibiso Dhowr Xidig Si Ay Gacanta Ugu Soo Dhigto Xidiga Khadka Dhexe Ee Kooxda West Ham United
HomeSuuqa kala iibsigaChelsea oo qorsheynee in ay iibiso dhowr xidig si ay gacanta ugu soo dhigto xidiga khadka dhexe ee kooxda West Ham United
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay dhageysato dalabyada seddex xiddig oo kooxda koowaad ah, Marco Alonso, Antonio Rudiger iyo Jorginho inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo si ay lacag ugu ururiyaan si ay u helaan adeegyada Declan Rice.
Kooxda ka dhisan Galbeedka London ayaa in muddo ah lagu xamanayey inay u dhaqaaqeyso Declan Rice, kaasoo u saftay kooxda Hammers isla markaana noqday laacib joogto ka ah xulka England tan iyo markii laga sii daayey akadeemiyadda Blues isagoo 14 jir ah.
Si kastaba ha noqotee, Hammers ayaa la rumeysan yahay in aysan ku iibin doonin lacag ka yar 80m kubad sameeyahooda, waxana la aaminsa yahay in lacagtaas aysan awoodin kooxda Frank Lampard sababto ah waxa ay qarash gareysay lacag badan intii lagu jiray xagaaygii hore.
Football Insider ayaa sheeganeysa in Frank Lampard uu qorsheynayo inuu dib u cusbooneysiiyo xiisihiisa Declan Rice markii uu dib u furmayo suuqa kala iibsiga, si kastaba ha ahaatee, Chelsea waa inay marka hore hubisaa ugu yaraan labo iib oo lacag badan ah si ay u maalgeliso heshiiska.
Kooxda ka dhisan Galbeedka London ayaa sidaas darteed dooneysa inay dhageysato dalabyada Marcos Alonso, Rudiger iyo Jorginho kuwaas oo dhammaantood lagu xaman jiray in ay xagaayga ka tagayaan laakiin ugu dambeyn waxay sii joogeen Stamford Bridge.
Jorginho ayaa boos joogta ah kahelay Blues ilaa iyo haatan ololahan, si kastaba ha noqotee, Alonso iyo Rudiger fursadahooda kooxda koowaad waxaa xadiday kooxda daafacyada cusub Ben Chilwell iyo Thiago Silva.